I-Internet Explorer 7 Language Interface Pack (LIP) yenzelwe izimakethe ezingenayo i-Internet Explorer 7. La maphakethe ahlinzeka abasebenzisi bamakhompyutha ngolwazi lokusebenzisa lokhu okusetshenziswa kakhulu ngolimi lwabo lwendabuko. Windows Internet Explorer 7 LIP Pack isezingeni eliphezulu, isetshenziselwa izimakethe zezilimi ezisavela njengeCatalan, Lithuanian, and Thai. Ngokubheka ubuchwepheshe be-MultiLanguage User Interface (MUI), I-LIP ihlinzeka abasebenzisi bedesikithophu ngolwazi olungamaphesenti angama-80% ngokuhumusha isethi encishisiwe yama-elementi e-interface. I-LIP ifakwa kwikhophi yewindows egunyaziwe kanye nenesisekelo esingaguquki solimi. Isisekelo solimi esidingekayo siya ngokuthi yiluphi ulimi oluku-LIP ofuna ukulusebenzisa.
Vakashela Microsoft Language Interface Pack Indawo yolwazi ngohlelo lwe-Language Interface Pack. Ukudawuniloda i-Internet Explorer 7 ngolulodwa ezilimini ezingama-24, vakashela Internet Explorer Worldwide site.
Lokhu kudawuniloda ngokwephakethe lokusebenza labakwaMicrosoft Windows XP Service Pack 2 kuphela. Ukudawuniloda amaphakethe olimi e-Internet Explorer 7 ukuze asetshenziswe ngabanye abasebenzisana nabakwaMicrosoft Windows, bheka lama dawunilodi angezansi.
Kumele kufakwe iphakethe lolimi i-OS LIP. Uma ungenalo iphakethe lolimi i-OS LIP, iphakethe kumele lifakwe lisuswa kwi- Microsoft Language Interface Pack site.
Uma indlela yolimi lwakho kungulimi lwamaSlovenian, akudingekile ukuthi ifake i-OS LIP eseceleni futhi ungaqhubeka ngokuthi ufake i-Internet Explorer 7 LIP. I-Internet Explorer 7 LIP yaseSlovak neyaseSlovenian aphinde asekelwe yiMicrosoft Windows XP Home Edition.
Uma uneWindows Starter Edition nendlela yokwenzeka (system) ivela ngolimi oluyilo, ukulungele ukufaka i-Internet Explorer 7 LIP. Uma i- Windows Starter Edition ivela ngolimi lwesiNgisi, kuyodingeka ukuthi uqale ngokufaka iphakethe lolimi ngokusebenzisa i-CD owayinikwa yilowo owayekudayisela.
Chofa Inkinobho yokudawnloda Ekuleli khasi ukuqala ukudawniloda noma ukhethe ulimi olwehlukile ohlwini olubheke phansi bese uchofa Iya .
Yenza okukodwa kwalokhu:
UKuqala ukufaka ngokushesha, chofa Vula Noma sebenzisa lolu hlelo ulusebenzisela lapho lutholakala khona .
UKukopisha lokhu okudawunilodiwe ekhompyutheni yakho ukuze ubuye ukufake esikhathini esizayo, chofa Gcina noma gcina lolu hlelo kwidiski .